नेपालका यी ठाउँमा कोरोना संक्रमण बिरामी थेग्नै नसकिने गरि बढे, हेर्नुहोस कुन जिल्लामा कस्तो छ अवस्था ? – Classic Khabar
नेपालका यी ठाउँमा कोरोना संक्रमण बिरामी थेग्नै नसकिने गरि बढे, हेर्नुहोस कुन जिल्लामा कस्तो छ अवस्था ?
April 30, 2021 378
नेपाल भारत सीमा जोडिएको बाँके जिल्ला शुरुमै कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट नराम्ररी प्रभावित भयो । प्राप्त विवरणअनुसार उक्त जिल्लामा सङ्क्रमितलाई भूइँमा राखेरसमेत उपचार गराइएको छ भने बिरामीले सघन उपचार कक्षसमेत पाउन नसक्दा जनजीवन थप प्रभावित बन्दै गएको छ । यो अवस्था काठमाडौँ उपत्यकामा समेत देखिएको छ ।
भारतबाट आएका व्यक्तिको परीक्षण गरी उचित व्यवस्थापन नभई खुलमखुला नेपाल प्रवेश गर्दा समस्या जटिल भएको जनस्वास्थ्य विज्ञको अनुमान छ ।
हुन पनि विगत वर्षमा भारतमा भयावहस्थिति भएकोमा त्यहाँबाट आएका व्यक्तिका कारण त्यसको केही हप्तामै नेपालमा पनि महामारी फैलिएको थियो । यसपाली पनि भारतमा विश्वमै उच्च गतिमा महामारी फैलिएको केही हप्तामै नेपाल प्रभावित हुन पुगेको तथ्य स्पष्ट छ । यसको मुख्य समस्या भनेको खुला सिमाना हो । भारतमा अक्सिजन नपाएर कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको समाचार बाहिर आइरहेकै छ ।
भारत कै अवस्था नेपालमा हुने हो की भन्ने चिन्ताका बीच सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रभावित जिल्लामा अहिले निषेधको आदेश जारी गरेर सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ ।
गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा आजसम्म १५ जिल्लामा पूर्ण र तीन जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञको घोषणा भएको छ । सरकारले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने अधिकार दिएको थियो ।
सोही अधिकार प्रयोग गर्दै बाँकेलगायतका केही जिल्लाले यसअघि नै आदेश जारी गरेका थिए भने धेरै जिल्लाले आजबाट लागू हुनेगरी एक हप्ताका लागि अत्यावयक बाहेकका गतिविधि गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञ जारी गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बाँके जिल्लाले वैशाख १३ गतेबाट निषेधको आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश २० गतेसम्म जारी रहने छ । त्यसपछि थप्ने अधिकारसमेत प्रजिअलाई नै रहेको छ । सुर्खेत जिल्लाले वैशाख १४ गतेबाट लागू हुनेगरी आदेश जारी गरेको थियो । आदेश यही वैशाख २१ गते राति १२ बजेसम्म जारी रहने छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायतका ११ जिल्लाले आज बिहानदेखि लागू हुनेगरी आदेश जारी गरेको छ । कुनै जिल्लाले बिहान ६ बजेदेखि नै लागू गरेका छ भने कुनै जिल्लाले राति १२ बजे (भोलि बिहान) बाट आदेश कार्यान्वयनमा लैजाँदै छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आज काठमाडौँका तीनै जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर) ले बिहान ६ बजेदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । उक्त आदेश यही वैशाख २२ गते राति १२ बजेसम्म कायम रहने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली बताउनुहुन्छ ।
यसरी आदेश जारी गर्ने अन्य जिल्लामा कास्की, कैलाली, पर्सा, कञ्चनपुर, दाङ, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, सल्यान र सुनसरी रहेका छन् । त्यसमध्य पाल्पा र चितवनमा आज राति १२ बजेबाट र सल्यानमा १९ गते बिहान ६ बजेबाट आदेश कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अन्य जिल्लामा भने आज बिहानैदेखि लागू भएको छ ।
यस्तै तीन जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञ जारी गरिएको गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कालिकोट, बाग्लुङ र बर्दियामा आंशिक आदेश जारी भएको छ । कालिकोटमा १० गतेबाट, बाग्लुङमा ७ गतेबाट र बर्दियामा १३ गतेबाटै लागू गरिएको हो ।
बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका १२, १३, १४ वडा तथा साविक अमलाचौर, पैयूँपाटा र नारायणस्थान क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा यसअघि नै लागू गरिएको थियो । त्यस्तै कालिकोटमा खाँडाचक्र नगरपालिका ११ को रेङ्गिलमा लागू गरिएको छ ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–५ र ६ को सम्पूर्ण क्षेत्र, बाँसगढी बजार क्षेत्र, बारबर्दिया नगरपालिकाको जयनगर, कतर्निया बजार, मधुवन नगरपालिकाको लाली बजार ओराली बजार, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको बगनाहा, भूरी गाउँ र ठाकुरद्वारा बजार, राजपुर नगरपालिकाको बजार क्षेत्र, बढैयाताल गाउँपालिकाका बजार क्षेत्र तथा गेरुवा गाउँपालिकाको शान्तिबजार र पशुपतिनगर बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञ जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइन्छ ?
आदेशानुसार सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
विवाह व्रतबन्धको हकमा बढीमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । विवाहमा जाँदा व्यानरसहित दुई वटा मात्रै गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने छ । विवाहमा जाँदा जिल्ला वा अन्तर जिल्लाका लागि पास नचाहिने तर पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्दा भने अनिवार्य पास चाहिने छ ।
उक्त अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधन चल्न पाउने छैन ।
सरकारी कार्यालयलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी भएको सवारी पास लिई सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने छ । विकास निर्माण कार्यमा चाहिने मजदुर र सामग्री ढुवानीका साधनको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा पास लिएर चलाउनुपर्ने छ ।
खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेकका व्यवसाय बन्द गरिएको छ । उपत्यकामा खाद्य सामग्री पसल, ग्रोसरी कक्ष बिहान १० बजेसम्म र साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म चल्न पाइने छ तर तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा र सहकारीलगायत राष्ट्र बैँकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाइने छ ।
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिको अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । पत्रकारको हकमा सूचना विभाग, पत्रकार महासङ्घ र स्वयं सञ्चार संस्थाले जारी गरेको प्रेस परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाइने छ ।
यसैबीच सरकारले नेपाल सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन गरेको छ । स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई निजले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य रुपमा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकले पनि उक्त मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले १० दिन अनिवार्य होटेल वा होम क्वारेन्टिनममा बस्नुपर्नेछ ।
Posted in समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, बैशाख १७ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextउपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएको २ दिनमै फेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारि गर्यो फेरी सर्वसाधारणका लागि यस्तो सूचना, बनाइदियो सहजीकरण, अब यी कामका लागि पनि पास नचाहिने
….त्यसपछि छिमेकीहरु पुगेर हेर्दा उनको मृत्यु भैसकेको थियो !
मनसुनले मात्र आएको होइन मेलम्चीमा बाढी, यस्तो छ कारण
आज १९ गतेका मुख्य समाचार-लकडाउन खुकुलो, रबि रोए, गाडी र यर्पोट खुले, नयाँ भाईरस फैलियो
दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन (1218)
हाम्रो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली, अब मिलेर एमालेलाई बलियो बनाउँछौं : भीम रावल (987)
शिल्पालाई सपोर्ट गर्दै प्रकाशलाई कडा जवाफ,कोहिलाई दारा निस्केको भन्यो कोहिलाई मानसिक समस्यामा पुरायो (भिडियो सहित) (930)
रात दिन श्रीमानको शा रीरिक स म्प र्कको या तना सहन नसक्दा (859)
प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमा फर्किएकी रामकुमारी झाक्री र योगेशले गरे यस्तो घोषणा (827)
जस्तो गुरु तेस्तै चेला हुन किशोर खतिवडा,लक्ष्मीको कुनै हैसियत छैन श्रीजना वाग्लेलाई जथाभाबी भन्ने (भिडियो सहित) (780)
३ वर्ष पहिले बुवाको मृत्यु, अहिले आमा ले पनि संसार छोडिन् : बिचरा यी नाबालक हरुको बिचल्ली (748)
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (739)
नायक किशोर खतिवडा आफुलाई गर्भवती बनाए भन्दै आरोप लगाउने लक्ष्मी गदाललाई भेट्न पुगे, भयो यस्तो बबाल (भिडियो हेर्नुस्) (737)
बुवाआमाले छोरि कसरि गर्भवती भयौ भनेर सोधपुछ गर्दा दिदीले आफ्नै भाइलाई हेरेपछि…..! (727)
जेठाजुबुहारी का’ण्ड : जेठाजुबुहारि गा’उ’नि’का’ला,जेठी श्रीमतीको रु’वा’बा’सि (भिडियो हेर्नुस)
तेस्रोलि’ङ्गी महिलालाई बिबाह गरेको राती नै श्रीमान् फ’रार,श्रीमतीको रु’वाबासी(भिडियो हेर्नुस)
डिभोर्सपछि पनि कान्छिलाई छोडेर जेठी श्रीमतीसँगै देखिए निखिल, श्रीमतीले खुलाईन् यस्तो रहस्य !
७ महिनाकी गर्भवती गीता श्रेष्ठको मृत्यु प्रकरणले लियो अर्कै मोड (भिडियो सहित)
आमाले घरमै केटा ल्याएर सुत्ने गरेको सानो छोराहरूले रुँ’दै सुनाए (भिडियो हेर्नुहोस्)